Digaag Gata si Puntland Shidaal Loogu soo Saaro
Digaag Gata, si Puntland Shidaal Loogu soo Saaro
Wasiirka Maaliyadda Puntland Maxamed Cali Yuusuf (Gaagaab) baa laga hayaa inu yiri: shirkadda Corsort la yiraahdo ayaa Puntland shidaalka ka baareysa. Wuxuu sheegay in aysan shirkaddu heysan dakhli ay wax ku baarto marka ganacsatada reer Puntland baa laga rabaa iney iibsadaan digaag si shirkaddu lacag u hesho dabadeedna shidaal loo soo saaro! Kalluunkii Puntland baa kooxo bucad ahi dhaceen marka ma haddaad rabtaan inaad digaag dadka ka gaddaan?
Awal baa Puntland heshiish la gashay Itoobiya si ay kalluun uga bedelato qaad/jaad; maantana waxay maraysaa digaag aan gadanno iyadoon bedel lahayn. Weligay heshiis noocaas ah ma maqal xitaa sheekooyinka khiyaaligaa kuma arag. Keliya, gumeysiga oo xoog wax ku qabsada ayey arrinta wasiirku ka suurtoobi kartaa. Bal u fiiri oraahdii hal-abuur Sangub oo ahayd:
� wanka macasha ii qabo
� adna gowrac ii maro
� dhiiggana aan muudsado
Hadda wasiirku wuxuu leeyahay digaag gata dabadeedna lacagtiinna ayaan shidaal idiin ku baareynaa. Wasiirku ma fahmi la�yahay in lacagta dadku ay iyagu leeyihiin oo aan heshiis aysan iyagun raalli ka ahayn loo geli karin? Wasiirka waxaan ku leennahay: annagoon digaag gadan maan lacagtayada ku raadsanno shirkado shidaalka noo qoda oon innagu xulunno? Caqli ruuxa lihi wuxuu fahmayaa in wasiirka ka wado: ganacsatada Puntland wey heysaa lacag shidaal lagu qodo marka si looga soo saaro, digaag halaga gado!
Lafdhabarta dhaqaalaha Soomaaliyeed waa xoolaha nool. Xoolihii noolaa oo la gadan la�yahay ka warran wasiirka leh ha la gato digaag laga keenay waddamo kale? Teeda kale haddii wasiirku ogaanlahaa dhibaatada kala heysata digaagga (shimbiro) iyo waddama dhaqda; maanta kuma hadleen hadalladaas. Qofkii akhbaarta caalamka kala socda saxaafadda ooy ku jirto BBC-da laanteeda Afsoomaaliga iyo warbaahinta kale ee Soomaaliyeedba iney sheegaan khatarka uu adduunka ku hayo cudurka la yiraahdo hargabka/durayga shimbiraha (bird flu) oo uu keeno feyras. Waddamadii qaniga ahaa baa hadda digaaggoodii qabbiray oo u diiday iney bannaanka istaagaan si uusan u qaadin cudurkaas; marka sidee lagu fekeray in digaagga khatarkaas ku jira la keeno waddan Soomaaliya oo kale ah oo xitaa manaafacaadsan la� hilibka xoolaha iyo kalluunka? Xoolaheennii noolaa oo caafimaad qaba baa hadda waddamada Khaliijku leeyihiin waa jirranyihiin! Waxay waddamadaasi fahmayaan dhibta ay keenikaraan xoolo jirran.
Maxaa arrintaas ku xambaari kara wasiir lagu tuhmayo in magaciisa laga hormariyo �Dr?� Maaddaama la xaqiijiyey in sun khatar ah lagu duugay Soomaaliya oo dhan ooy Puntland ku jirto. Lana xaqiijiyey in nimanka dullaaleyda u ah dagaaloogayaashu ay magacooda ka hormariyaan �Prof.� ama Dr. Waxaa cad in Xaafuun iyo aag dhan oo Puntland ka mid ah laga gaday shirkad iyaduna aan lacag heysan laakiin ay dhici karto in la yiraahdo sigaar halaga iibiyo si lacagta sigaarkaas ka soo baxda, Puntland loogu sameeyo dekedo, garoommo diyaaradeed iyo waddooyin laami ah!
Waxaan shacabka Puntland u sheegayaa haddaad maqli jirteen dhukaan, sambab, qanje iyo cudurro kale oo xoolaha keliya lagu maleynjiray in hadda hargabka shimbirahu ku dhici karaa dadka. Sidoo kale waxaa loo malaynayaa in dadku kala qaadi karaan. Feyraska uu keeno hargabka dadka ku dhaca waxaa la dagaalama difaaca jirka oo garanaya. Inta badan wuxuu hargabku dilaa dadka waaweyn, carruurta yaryar iyo dadka cudurada kale diloodeen. Laakiin hargabka shimbiruhu noo soo gudbin karaan wuxuu keenayaa in feyraskaasi bedesho barootiinkiisa ku daboolan dabadeedna uu ka raadgato difaaca jirka. Mar haddaan difaaca jirku garin kain cudurka, waxay keeneysaa in torob torob loogu dhinto iyadooysan jirin si loola tacaalo.
Marka dadka reer Puntland waxaan ugu qalbiqaboojinayaa inay jiraan dad ka dhamqanaya dhibka dadka iyo degaanka lagu hayo. Marka, inkastoo idinkoo soo taagan la idin iibsaday haddana waxaa idiin maqan dad badan oo aruurinaya feylasha lagu qoroyo dadka sunta, xaalufka iyo iibka ka wada geyigeenna. Marka shacabkii waxaa ka soo haray iney sidii Ismaaciil Mire dhahaan:
� ilmaroojihii bey khatalay kii aan aamminaye (hadda madaxda Puntland)
� amakaagay goortay wankii arraxda tuujeene
� anigoo arkaayaa gacmaha la igu iibsadaye
Sida Soomaalidu u tiraahdo: raggu jabkiisuu sheegtaa ayaa Ismaaciil Mire Allaha u naxariistee gabaygaas ku bilaabay:
� nimanyahow awoow iyo awoow iyo abkaan sheegto
� iyo anigu weligay ma arag iibsi lacageede
Waxaa kaloo la rabay haddaysan madaxda Puntland garin karin cidda heshiis lala geli karo iyo waxa dhib ah oo ka imaan karta iney weydiiyaan dadkii garanaya. Sidii Nabigu (SCW) xaddiiska ugu sheegay in dawada jahligu tahay weydiinta.
Geeddi ma Raalli Gelin doonaa Puntland: Su�aal: janan ciidan ahi ma ka badin karaa dastuurka macallin jaamacadeed ..Guji...
Faafin: SomaliTalk.com | Sept 14, 2005